Aung's Investment: Candlesticks - Part II
Posted by Aung Myo Htet at 11/16/2009 11:48:00 AM
Aung Myo Htet November 16, 2009 11:51 AM
စာဖတ်သူတွေဆီက ဒီထက်ပိုပြီး Feedbackလိုချင်တယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်လည်း ပိုသင့်တော်မယ့် Postလေးတွေကို စဉ်းစားရေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
chit November 17, 2009 5:41 PM
after reading your valuable posts, I would like to know
where should I start, bank financial consultant? or financial advisory services?
like you said, i like to start with baby steps...
Aung Myo Htet November 17, 2009 7:05 PM
ဘာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်သင့်သလည်းတော့ ကျွန်တော်လည်း MZTရဲ့ Career Objectiveကို မသိလို့ မပြောတတ်ဘူး။ သူများကို Adviseလုပ်ပြီး Commission Incomeမှန်မှန်လေး လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Advisoryလိုင်းက ပိုသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် Blogကတော့ Investor/Trader Full-timeဖြစ်ဖြစ်၊ Part-timeဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်သူတွေအတွက် Targetထားပါတယ်။ Trader/Full-time investorလိုင်းဟာ တကယ်တမ်းတော့ Advisoryလိုင်းနဲ့ ကွာပါတယ်။ ဘာနဲ့တူလည်းဆိုတော့ Traderဟာ လက်ဝှေ့သမားနဲ့တူပြီး Advisorကတော့ လက်ဝှေ့သမားရဲ့ Trainer/Coachနဲ့တူပါတယ် - တကယ်တော့ ထိုးချင်မှထိုးနိုင်မယ်း)
chit November 18, 2009 7:58 AM
:) sorry for misunderstanding... I mean I like to invest part time period .. but I don't know who should I consult with ( bank financial consultant or financial serives) I tried withacouple of bank consultants and they tried to sell me mutual funds... in fact, I like to be an investor (to take some chances) but I don't have financial advisor. Should I get one? or Should I try online trading? if so, pls help me becoming an investor by starting with baby steps
Money Minded November 19, 2009 12:16 PM
Belt-hold candleတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Crowd Psychologyက ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။ Support နဲ့ Resistance များလား?။
Aung Myo Htet November 19, 2009 12:56 PM
Quite close. Usually belt-hold appears at support and resistance lines. Main idea is it indicates the dominant group bulls or bears has switched. That's why the longer the candle, the more reliable the signal is.
YNWT November 20, 2009 1:17 PM
မေးပါရစေ... Candle တွေကို interpret လုပ်ဖို့ဆိုရင် အခုပြောပြီးသွားတဲ့ ပုံစံ formation တွေမှာ volume ရဲ့ အရေးပါမှုကို သိချင်ပါတယ်..
Aung Myo Htet November 20, 2009 1:22 PM
Volumeများလေ Candle signalက မှန်လေဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတာကတော့ Volumeကိုလည်း Trend/Slope lineလေးတွေ ဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ Shooting Starမလာခင် Volume Trendဟာ downwardဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် Recent Up Trendဟာ အရှိန်ကုန်နေပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ There isasaying "Volume = Validity".